10 -ka mobilada ee ugu fiican suuqa (UPDATED) - Sebtember 2021 | Androidsis
Haddii aad ka fikirayso inaad u cusboonaysiiso taleefankaagii hore mid ka mid ah mobilada ugu fiican suuqaWaxaa laga yaabaa inaad horeyba u ogaatay in, sida layaabka leh ay uguhoreyn karto marka hore, tani waa hawl aad u adag. Qeybta taleefanka gacanta ayaa ka mid ah kuwa ugu qanacsan suuqa, oo leh noocyo kala duwan iyo soosaarayaal iyo wixii ka sarreeya, oo leh moodallo badan, badan, leh astaamo kala duwan, qiime kala duwan, iyo wixii la mid ah. Sidee loo ogaadaa markaa midka ugu fiican?
At Androidsis waxaan ka warqabnaa in inbadan oo idinka mid ah, hal mar ama mid kale, aad isku arki doontaan xaaladan, marka waxaan rabnaa inaan kaa caawino inaad xulashadaada ka dhigto mid fudud. Oo annaguna waxaannu samayn doonaa laba jeer. Dhinac, liis aan ku soo dari doonno 10-ka mobilada ugu fiican suuqa; dhinaca kale, anaga oo ogsoon in baahiyahaagu ay badan yihiin oo kala duwan yihiin, iyo in moodooyin cusub ay had iyo goor soo ifbaxayaan, waxaan ku siin doonaa taxane ah tilmaamo kugu hagaya markaad iibsanayso mobilo cusub.
1 10-ka mobilada ugu fiican suuqa
1.9 Sharaf 8 Pro
2 Maxay tahay inaad tixgeliso markaad iibsaneyso mobilada ugu fiican
2.1 Shaashad: cabbirka iyo tayada
2.2 Waxqabadka iyo awoodda
2.3 Nidaamka hawlgalka
2.4 Kaydinta Gudaha
2.6 Dhinacyada kale ee aan tixgelin karno / tixgelin karno
Halkan waxaan ku soo bandhigeynaa kuwa maanta loo qaadan karo 10-ka mobilada ugu fiican suuqa. Xaaladdan oo kale maanaan cayimin xaddiga qiimaha sida aan uga qaybgalno arrimaha farsamada si kastaba ha noqotee, sida aad arki doonto, ma jiro casriga casriga ah, maxaa yeelay dhammaantood waxay leeyihiin faa'iidooyin iyo qasaarooyin cayiman. Dhanka kale, ha ilaawin in liiskan sida ugu fiican loogu qaatay talo ahaan, saddex sababood oo aasaasi ah:
Marka hore, bil kasta aalado cusub ayaa soo baxa kuwa kalena waa la cusbooneysiiyaa, in kastoo aan isku dayi doonno inaan xulashadeenna cusbooneysiinno, haddana waxaa suurtagal ah inuu jiro moodeel aynaan weli ka warqabin.
Marka labaad, liistadani maahan darajo, laakiin waa xulashooyinka moobiillada ugu fiican ee suuqa yaalla.
Saddexaad, Ficil ahaan, mobilada ugu fiican ayaa had iyo jeer noqon doona midka sida ugu fiican u daboolaya baahiyahaaga shakhsi ahaaneed iyo rajooyinkaaga.
Horey ayey dad badani ugu tixgeliyeen inay yihiin casriga ugu wanaagsan ee 2017, ilaa hadda, cusub Galaxy S8 y S8 Plus laga soo bilaabo Samsung waxay u taagan tahay horumar la taaban karo oo ku saabsan jiilkii hore, oo leh shaashadda OLED ee si buuxda uga faa'iideysata xagga hore ee boosteejada, kaydinta xawaaraha sare leh ee UFS 2.0, NFC, Bluetooth 5.0 (waa mid ka mid ah boosteejooyinka ugu horreeya ee lagu daro isku xirnaantan), kaamirooyin tayo sare leh oo leh Sony dareemayaal, 4 GB oo RAM ah, processor-ka Snapdragon 835 ee Mareykanka, Shiinaha iyo Japan, iyo Exynos 8895 ee dalalka intiisa kale ...
Sidoo kale Koonfurta Kuuriya wuxuu ka yimaadaa calanka cusub ee LG, LG G6, shaki la'aan mid ka mid ah mobilada ugu fiican suuqa, oo leh shaashad 5,7-inji ah oo si buuxda uga faa'iideysanaysa xagga hore, oo ka samaysan bir iyo muraayad, processor-ka Snapdragon 821, 4 GB oo RAM ah, 32 GB oo ah keydinta UFS, ku-dallaca wireless, biyaha IP68 iyo u adkeysiga boodhka, suurtagalnimada laba barnaamij oo isku mar ah shaashadda iyo waxbadan oo dheeri ah
Soo saaraha ugu weyn ee Shiinaha ayaa noo keenaya calankiisii ​​ugu dambeeyay, Huawei P10, oo midabbo kala duwan leh iyo naqshad "xitaa ka badan iPhone" haddii ay suurtagal tahay. 3.200 mAh baytari, isku xira USB-C, processor Kirin 960, 4 GB oo RAM ah, 64 GB oo keyd ah, shaashad 5,15-inji ah oo leh tayo aan caadi aheyn oo midab, midab iyo kala duwanaansho ah, anteeno LTE ah oo lagu diyaariyey 4 × 4, ama 12 iyo 20 megapixel dareemayaal Leica, oo leh qaar ka mid ah astaamaha ugu caansan.
Ragga weyn ee Shiinaha ayaa ku soo ifbaxay terminalkan cajiibka ah ee quruxda badan kaasoo dhabarka waxaa laga sameeyay quraarad. Waxay leedahay shaashad 5,15-inji FHD ah, Snapdragonm 835 octa-core processor, 6 GB ee RAM, 64 GB oo ah keydinta UFS 2.0, labalaab 12 kamarad oo megapixel ah oo awood u leh duubista fiidiyowyada 4K iyo 30 fps, xasiliyaha indhaha, NFC, iwm. Iyo sidoo kale, qiimo taas weeye ka hooseeya 500 euro, ficil ahaan kalabar waxa ku kacaya Galaxy S8.
Shirkadda Taiwanese waxay soo bandhigeysaa mid kale oo ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu wanaagsan suuqa maanta HTC 10, taleefan casri ah oo leh shaashad 5,2-inji ah, naqshad macdan ah oo casri ah, kamarad weyn oo 12-megapixel ah, processor afar geesle ah oo Snapdragon 820 ah, 4 GB oo RAM ah, 32 GB oo keyd ah sida caadiga ah, laba ku hadla, batari 3.000 mAh ah iyo wax badan oo lagu daray.
Xperia XZ oo ka socota shirkadda Japan ee Sony ayaa ka mid ah moobilada ugu fiican suuqa. Waxay na siisaa shaashad IPS ah 5,2 inji FullHD iyo 650 nits, sidaa darteed, maalin cad, waxay umuuqataa raaxo. Intaa waxaa sii dheer, wuxuu isku daraa processor afar geesle ah Snapdragon 820 oo ay la socdaan 3 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keydinta gudaha ah. Iyo sidaad filan lahayd, waxay isticmaashaa a Guriga IMX300 dareeraha leh kamarad 23 megapixel ah oo duubaysa 4K. Si kastaba ha noqotee, iyada oo leh 2.900 Mah batteriga Xperia XZ waxaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn kuwa sida aadka ah u isticmaala ee waqti badan ku qaata meel ka baxsan godka.
Raadinta weyn ayaa ku saxsanayd markii la bilaabay 2016 khadkeeda cusub ee casriga casriga ah ee Pixel. Waxaa soo saaray shirkadda HTC, waxay leedahay naqshad aluminium ah iyo dhabarka kore ee muraayadda (halka uu ku yaalo dareeraha faraha). Gudaha, ka Google Pixel Waxaa ka mid ah processor-ka Snapdragon 821, 4GB oo RAM ah, 32GB oo ah UFS 2.0 kaydinta oo aan lahayn akhristaha microSD, iyo Android Nougat. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay shaashad 5-inji ah iyo 12,3 megapixel kamarad weyn oo leh f / 2.0 aperture.
In kasta oo xilligan oo keliya Mareykanka la haysan karo, haddana abuuraha Android, Andy Rubin, ayaa soo bandhigay PH-1 ee taxanaha Muhiimka ah, taleefan casri ah oo leh 5,71 inji oo uu ilaaliyo Gorilla Glass 5 ayaa si buuxda uga faa'iideysanaya hore.
Waxaa weheliya processor processor Snapdragon 835, 4GB RAM ah, 128GB oo ah keyd gudaha ah, USB-C, 3.040 mAh baytari iyo kamarad weyn oo labalaab leh oo leh 13-megapixel sensors.
Sharaf 8 Pro
Haddii ay dhacdo inaadan ogeyn, Maamuusku waa astaanta labaad ee shirkadda Huawei, waana mid annaga naga yaabisay tan Sharaf 8 Pro naqshad cajiib ah iyo waxqabad (Kirin 960 processor oo leh 6 GB ee RAM iyo 64 GB oo ROM ah) oo la socda Android Nougat, oo ah shaashad weyn oo 5,7-inch QHD ah, iyo is-maamulidda batteriyadeeda heer ahaan, 4.000 Mah. Dabcan, kama haysato kamaradda ugu fiican suuqa, in kasta oo ay 12 megapixels oo kamaraddeeda laba-geesoodka ah leh, isla markaana ay ka madhan tahay ka-hortagga biyaha iyo boodhka, oo ah wax aannu ka helno taleefannada kale ee la midka ah.
Oo waxaannu ku dhammayn doonnaa mid ka mid ah, laga yaabee, inuu yahay kan ugu yar ee la yaqaan ee liiskan, in kasta oo uu ka tirsan yahay astaanta-koowaad, Lenovo Zuk Z2 Pro, terminal leh processor afar geesle ah oo Snapdragon 820 ah, Adreno 530 GPU, 4 GB oo RAM ah, 64 GB oo keydinta gudaha ah, 3.100 batari Mah oo leh nidaam lacag-bixin deg deg ah, Isku xira USB-C, laba SIM, akhristaha faraha, 5,2-inji IPS shaashad ah iyo kamarad 13 megapixel ah.
Tanna waxaan ku dhammaystireynaa xulitaankan moobilada ugu fiican suuqa. Xul adag, sax? Taladeenu waxay tahay inaad ahmiyad gaar ah siiso dhinacyada ku xusan qaybta koowaad ee qoraalkan, kuwaas oo ha ku hogaamin kaliya qiimaha ama sumcadda sumadda iyo, wax kasta ka sarreeya, inaad raadiso mobilada ku habboon baahiyahaaga, isticmaalkaaga iyo rajooyinkaaga.
Maxay tahay inaad tixgeliso markaad iibsaneyso mobilada ugu fiican
Way cadahay in inteena badan ee inaga mid ah inay qaadeyso qiimaha sida udub dhexaadka u ah go'aankeena, si kastaba ha noqotee, waa inaan sidoo kale ogaano in qiimaha aad ayuu qaraabo u yahay Hagaag, mararka qaarkood, wixii maanta waxyar ka qaalisan waxay ku dambayn doonaan inay noqdaan kuwo faa'iido leh si ka wanaagsan oo dheer, mustaqbalka fogna, way ka jaban karaan. Marka, adigoon indhaha ka qarsanayn sicirka qiimaha, laakiin aan yareyno wax muhiim ah, markaad dooranayso mobiil cusub waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa arrimaha sida kuwa soo socda.
Shaashad: cabbirka iyo tayada
Waqtigan xaadirka ah, waxa loogu yeero xarafyada (taleefannada casriga ah oo leh shaashado ka weyn 5,5 inji) ayaa sii xoogaysanaya, hase yeeshe, weli waxaa jira isticmaaleyaal badan oo doorbida mobiil yar. Runtu waxay tahay, haddii aad indho wanaagsan leedahay, oo aadan u adeegsanaynin terminaalkaaga si aad u akhrisato ama u daawato fiidiyowyada si xoog leh uga socda YouTube, Netflix ama wixii la mid ah, waxaad doorbidi kartaa qalab aad loo maamuli karo oo leh shaashad ballaadhan. Dhinaca kale, haddii shaashad weyn ay tahay wax aadan diyaar u ahayn inaad iska dhiibto, waa inaad sidoo kale tixgelisaa taas Soo-saareyaal badan ayaa si fiican u isticmaalaya hore ee xarunta si ay u bixiyaan shaashad dheeraad ah oo ku taal meel yar. Dabcan, tayada muuqaalka waa inaad sidoo kale tixgelisaa nooca guddiga (LCD ama AMOLED) iyo xallinta (HD, FHD, 4k, iwm).
Waxqabadka iyo awoodda
Midkeenna ma doonayo taleefan cusub oo hareeraha laga xirto marka mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay tahay inaan fiiro gaar ah u leenahay waa awood iyo waxqabad. Haddii aan sameyneyno "aasaasi" adeegsi ah (facebook, twitter, email, internet-ka ka fiiri ...), processor-yada ugu fudud ayaa na siin doona khibrad fudud. Si kastaba ha ahaatee, Haddii aan ku siin doonno barnaamijyo dhammaystiran oo dheeri ah, ciyaaro wata shaxano wanaagsan iyo in ka badan, markaa waa inaan doorannaa xoogsato, xawaare sare iyo xoog-karti-dhaliyeyaal wax ku ool ah oo sida ugu macquulsan wax u qabta.. Si fikrad lagaa siiyo, qaar ka mid ah Chips-yada laga dalbaday laga soo bilaabo ugu hooseeya iyo kuwa ugu sarreeya waa MediaTek MT6735, Snapdragon 210, Mediatek MT6753, Snapdragon 415 and 430, MediaTek Helio P10, Snapdragon 616 and 617, Kinrin 650, MediaTek Helio P20, Snapdragon 650, MediaTek Helio X20, Exynos 8890, Snapdragon 820, Snapdragon 835, iwm.
Waqtigan xaadirka ah waa caddayn: nooca ugu dambeeya ee Android markasta wuxuu noqon doonaa xulashada ugu fiican in kastoo, sidaan ognahay, tan ay adag tahay in la gaaro. Taladayadu waxay tahay inaadan iibsan wax taleefan ah oo aan sal lahayn, ugu yaraan, Android 6.0 Marshmallow wixii ka dambeeya.
Inta badan taleefannada gacanta ee Android waxay leeyihiin taageero kaararka microSD, si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto hawl-qabad fudud ee codsiyadaada, haddii aad ciyaari doontid ciyaaro awood leh, hubi inaad haysato kayd badan. 16GB horeyba wuu ugu gaabsaday dadka isticmaala badankood, sidaas darteed fiican wuxuu ku bilaabmaa 32GB iyo wixii ka sareeya. Kaarka microSD waxaad ku keydin kartaa sawirro, fiidiyowyo, muusiggaaga ... Laakiin barnaamijyada iyo cayaaruhu waxay ku socon doonaan xusuusta taleefanka, waana halka uu furaha ku yaal.
Haddii aad sawirro badan qaadatid, oo waliba aad doonaysid inay noqdaan kuwo tayo leh, waa inaad doorataa taleefan casri ah oo leh kamarad wanaagsan, laakiin taxaddar! waxaa jira dhinacyo ka muhiimsan megapixels:
Furitaan balaaran (a f yar).
Dhererka dhererka gaagaaban
Cabirka dareemayaasha waaweyn.
Tayada muraayadaha indhaha ama ujeedada.
Inay leedahay xasiliya indhaha.
Marka la soo koobo, kuwiinna aqoonta u leh sawir qaadista ayaa si ka fiican aniga ka ogaan doona waxa ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeeshaan, waana hubaal inaad ogaan doontid.
Dhinacyada kale ee aan tixgelin karno / tixgelin karno
Iyada oo ay weheliso cabbirka iyo tayada shaashadda, awoodda iyo waxqabadka aaladda, kamaradda ama nidaamka hawlgalka ee lagu keenayo, waxaa jira dhinacyo kale oo ay tahay inaan sidoo kale ilaalino marka aan iibsaneyno taleefan gacmeed cusub. Qaar ka mid ah, oo ahmiyaddooduna inta badan waxay ku xirnaan doontaa isticmaalka aan siinno ama waxyaabaha aan ka fileyno:
Biyaha iyo boodhka iska caabbinta.
4G qaybta isku xirnaanta.
Nidaamka nidaamka lacag bixinta degdegga ah.
Miyaad ku dari lahayd aalado kale liiskan mobilada ugu fiican Ka imanaya suuqa?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » 10-ka mobilada ugu fiican suuqa
Burcad badeed Erik dijo
Ma ahan OnePlus liiska?
Ma qosol baa mise waa maxay?
OnePlus 3T wuxuu ahaa mid aad ufiican kii sanadkii hore. The OnePlus 5 ee sanadkan ayaa ujeedkiisu yahay inuu ku celiyo, ama ugu yaraan uqalmo masraxa oo xitaa lama sheegin?
Voicer, oo ah barnaamijka codka audio-ka WhatsApp u beddelaya qoraal